Maitiro ekugadzira iyo Apple logo pa iPhone 6 jekesa | IPhone nhau
Maitiro ekugadzira iyo logo yeApple pa iPhone 6 irambe
Pane chinhu chinozivikanwa cheMacbook icho vazhinji vanochivawo mumidziyo yeIOS, zvirokwazvo tiri kutaura pamusoro peapuro yakadzoserwa iyo Apple yakaisa mumakomputa ayo e brand kubvira 2009. Zvisinei, maapuro akadzoserwa eiyo iPhone akatanga kutanga kubuda 4 ne4s kutora mukana wegirazi rayo kumashure nekushandisa mashoma akareruka maLED anoshanda nechishandiso. Iye zvino taona kuti izvi zvakare zvinogoneka pane iPhone 6 uye 6s zvishandiso saka tiri kuzokupa ipfupi kuti ungazviita sei.
Ini pachokwadi handifunge nezve chero chinhu chekuita, asi isu tine vazhinji vashandisi vanofara nezve mukana wekuita yavo apuro kupenya sezuva remangwanani. Aya mashandiro zvakare anoda kuziva, saka isu tichazotaura nezvazvo. Gore negore tave takamirira Apple kuti iise aple yakadzoserwa kune iyo iPhone, asi haina kupinda mukati kusvikira zvino. Nekudaro, iwe une imwe nzira, yakapfava yekuisirwa "kit" inowanikwa kune chero munhu ane ramangwana rine screwdriver, tinokusiya vhidhiyo yekuti yakaiswa sei uye kuti inoshanda sei.
Izvo hazvifanire kutora iwe inopfuura hafu yeawa kuisa, kana maminetsi gumi kana iwe watove watojaira kumisikidza uye kudzikisa Apple zvishandiso. Kwemari isingasviki 20 euros unogona kuwana kit iyi ichatibvumidza kujekesa apuro re iPhone yedu kuitira kuti isu pasina mubvunzo tive neiyo "fashoni" ye iPhone munzvimbo iyi. Kunyangwe hazvo zvirizvo, isu hatizive kana ichibhadhara njodzi yekuti iwe ubhadhare chishandiso chete ichi "chinongedzo". Iwe zvakare une mukana wekuutenga uye kuenda nawo kune nyanzvi SAT, kunyangwe uchiziva matambudziko akamuka neError53 zvatova zvinotyisa kuvhura iPhone yedu panjodzi yekuti isu tasara neine mapepa anorema. Ehe, shinga, iyi ndiyo nzira yakanaka yekudzidza, uye ita kuti apuro re iPhone yako ripenye nekutenga KITI IYI paAmazon.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekugadzira iyo logo yeApple pa iPhone 6 irambe
Izvi ndizvo zvandaigara ndichida kuita! Ini ndichaiongorora zvakanyanya! Ndatenda!
Mhoroi, ndinokuteverai kubva kuChile.
haimhanye njodzi yekukanda kukanganisa kana uchizviita?
zvakanaka kwazvo asi ini handingashinga kuzviita.
Unogona sei kutenga izvo zvekushandisa kubva kuSpain?
Cherekedza apple ye iphone7 kana 8
Oops, yangu iPhone 6 ingave yakanaka kwazvo, kutya ndekwekuti Apple ichaivharira, uye iyo yekushandisa bhatiri ingave yakawanda? Zvingave zvakanaka kana vakanyora katsamba vachitsanangura zvimwe zvakanakira nezvakaipira izvi.
Unofanirwa kunge uri…, kuvhura nharembozha ye1000 kuitira kuti mwenje ubatidzwe muLa Manzanita…., Munhu wacho anoshamisa !!!! hehehehe
Hahaha Antonio wataura chokwadi, asi kana vakaisa chiziviso chakatungamirwa pairi, michina inokwidza zana remadhora nekuti iRed haina kumboonekwa uye kuti haina kuita kunge kukwikwidza (ingave iled) saka vanotengesa isu tinodhura foni mbozha hahaha
chaizvo iyo skrini inotendeuka kana vakutumira chimwe chinhu, uye kana iwe uchida chimwe chinhu chakatungamirwa, unogona kuita kuti mwenje ubude ndinofunga. zvirinani nekufona
Zvakanaka kwazvo ndinokukorokotedza neizvozvo zvakaisvonaka.
Edgar Duarte Valenzuela akadaro
Mangwanani akanaka, ndinoronga sei WhatsApp meseji pane yangu iPhone kuti itumirwe pazuva uye nenguva iyo inodiwa nemushandisi.
Pindura kuna Edgar Duarte Valenzuela
Iyo FBI inosimbirira kuti Apple ibatsire kunyangwe vakachinja Apple ID
Iyo Comuniame application inosvika kune iOS App Store